Kumannaan qoys oo ku barakacay fatahaado cusub oo uu sameeyay wabiga Shabeelle. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Kumannaan qoys oo ku barakacay fatahaado cusub oo uu sameeyay wabiga Shabeelle.
Kumannaan qoys oo ku barakacay fatahaado cusub oo uu sameeyay wabiga Shabeelle.
Waxaa kordhay qasaaraha hantiyeed iyo saamaynta nololeed ee ka dhalatay Webiga Shabeelle oo ku fatahay illaa 92-tuulo oo hoos yimaada degmooyinka Balcad iyo Jowhar ee gobolka Shabeelaha dhexe, sida uu sheegay maamulka gobolka.
Maxamed Cabdi Sheekh Xaandow Gudoomiye ku xigeenka dhinaca siyaasadda ahna ku simaha gudoomiyaha gobolka Shabeelaha dhexe ayaa SONNA u sheegay in ay fatahaadda Webiga ku barakaceen in ka badan 244-kun oo Qoys, kuwaas oo isugu jiray Beeraley, Xoolo dhaqato iyo dad tuulooyinka daganaa, kuwaas oo hadda u baahan kaalmo.
Dhul beereed badan oo ay ka baxayeen dalagyada Sisinta, Galleey, Bariis, Digir iyo khudaarta nuoocyadeeda kala duwan ayaa sidoo kale ku baaba’ay fatahaadda Webiga, waxaana beeraleyda oo faa’iido ka filayey tacabkooda ay hadda ku qasbanaadeen inay cid kale ku tiirsanaadaan.
Dadka ku barakacay fatahaadda ayaa qaarkood soo gaaray magaalada Muqdisho, si ay maareeyaan nolol maalmeedkooda, waxaana wali jira cabsi laga qabo inay fatahaaddu gaarto deegaano kale, xilli waddooyinka qaar ay biyo lixaad leh ay xireen, sida maamulka gobolku sheegay.
Previous articleMadaxweyne Qoor-qoor oo maanta hortegaya Golaha Aqalka Sare.
Next articleGermany oo qorsheynaya in uu magan galiyo qaxooti ku sugan Greece.